Hlaziya i-contour yamehlo - iimaski ezenziwe ekhaya | Bezzia
USusana godoy | 12/01/2022 12:00 | Ubuhle
I-eye contour yenye yezona ndawo zibuthathaka, kuba ulusu luncinci kwaye ngoko lunokubandezeleka ngaphezu kobuso bonke. Ukongeza, njengoko sisazi, izangqa ezimnyama zinokuvela ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye zizinze ebomini bethu, zenze amehlo ethu abonakale ebuthuntu. Ke ngoko, kufuneka sehle emsebenzini ukuvuselela i-contour yamehlo ngothotho lweemaski.
Kuba ngokuqulatha ukutya kwasekhaya siya kunika ulusu zonke izithako ezizidinga ngokwenene. A Ukufakwa kakuhle kwamanzi kunye nokubheja kwivithamin E ngamanye amanyathelo abalulekileyo ekufuneka siwathathele ingqalelo. Kodwa ukuba ufuna ukuyibona ngendlela yeemaski ukuvuselela ubuso bakho, ungaphoswa yiyo yonke into elandelayo.
1 Iqanda elimhlophe ukuvuselela i-contour yamehlo
2 Betha kwimaski ye-antioxidant
3 Ungaphoswa yiavokhado!
4 Iyogathi engenanto
Iqanda elimhlophe ukuvuselela i-contour yamehlo
Ukuthetha nge-vitamin E, iqanda elimhlophe liqulethe le vitamin ngoko sisezandleni ezilungileyo. Ngaphandle kokulibala ukuba ineqela B, ngoko iya kuhlala ikhusela ulusu lwethu. Ngoko ke, kufuneka sisebenzise kwindawo ephathwayo, leyo kule meko i-eye contour. Siyiyeke iphumle ide yome ngoba lento iya kusinceda siqinise ulusu njengoko sifuna. Emva koko uyisuse kwaye uhlambe ubuso bakho kakuhle, uhlala usebenzisa ukhilimu othambisayo. Khumbula ukuba ungayenza yonke imihla ukuze ukwazi ukubona ezona ziphumo zibalaseleyo eziya kusishiya ngaphambili.
Betha kwimaski ye-antioxidant
Siye saphawula ngayo kwaye kukuba ulusu ludinga idosi yeevithamini, ngoko, akukho nto ifana nokubheja kwiimaski ezithwala konke ukutya okusinika idosi efunekayo yee-antioxidants. Kuyinyani ukuba zininzi, kodwa kule meko siza kudibanisa iminqathe embalwa kwaye siyixube kunye nejusi yeorenji kunye neepunipoyi ezimbini zobusi. Xa sinawo wonke umxube kakuhle homogeneous, lixesha lokuwusebenzisa eluswini kwaye kuloo ndawo ethile ukuvuselela i-contour yamehlo. Ngoku kufuneka ulinde malunga nemizuzu eyi-15 kwaye uyisuse ngamanzi amaninzi. Okokugqibela, awunakulibala ukusebenzisa isithambisa osithandayo, ukuze usebenze ngakumbi iziphumo.
Zombini ngobuhle kunye nezitya zethu ezizithandayo, zihlala zikhona ngenxa yobuninzi bezondlo ezinazo. Ke, kwakhona, awufuni kuphulukana ne-eye contour rejuvenation. Kule meko sifuna isiqingatha seeavokhado esele ivuthiwe. Siza kuyixuba kunye neqanda elibethiweyo kunye namathontsi e-oyile enokuthi ibe yioyile yerosehip, kuba isetyenziswa kakhulu kula maqhinga. Xa sele senze umxube kakuhle, siya kuyisebenzisa kwindawo yokuphathwa, silinde imizuzu embalwa kwaye siyisuse kwakhona ngamanzi. Ngaphandle kokungathandabuzeki, ulusu luya kuqokelela zonke iivithamini kunye ne-hydration ezinikwa ezi zithako.
Ngokubanzi, singatsho oko i-yogurt yendalo inceda ukuphelisa imibimbi, ngaphezu kokunika ukukhanya ngakumbi kwesikhumba kunye nokulwa ne-acne. Ngoko ke sesinye sezithako zeenkwenkwezi kodwa namhlanje siza kuyidibanisa necephe lekhala. Ekubeni i-hydration ikhona kwesi sithako. Xa zidibene ziya kwenza ulusu lwethu lube sempilweni, lube mpuluswa kwaye lube mpuluswa. Ke, uya kuyisebenzisa njengemaski, uya kulinda malunga nemizuzu engama-25 kwaye emva koko, ususe ngamanzi njengoko besisenza kwinqanaba ngalinye. Ulusu lwakho luya kuthamba kakhulu, kodwa ukuba uphinda esi senzo amatyeli ambalwa ngeveki kwaye uphumle ngezilayi ze cucumber ezimbalwa emehlweni akho, uya kuzibona iziphumo zayo ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Iimaski zokuvuselela i-contour yamehlo
Ngaba ukhe wacinga ngokuguqula into oyithandayo ibe lishishini?